अब बेलुनमा उडेर पोखरा घुम्न पाइने, कती खर्च लाग्छ ? आकाशबाट के-के देख्न सकिन्छ ? (हेर्नुहोस भिडियो) | Lek Besika Bhakaharu - Online News Portal
अब बेलुनमा उडेर पोखरा घुम्न पाइने, कती खर्च लाग्छ ? आकाशबाट के-के देख्न सकिन्छ ? (हेर्नुहोस भिडियो)
नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल साहसिक खेल बेलुनमा बसेर पोखराको मनोरम दृश्यावलोकन गर्ने चाँजोपाँचो मिलाएको छ ।